Senatera Filipiana Nanapa-kevitra Hanameloka Ny ‘Vaovao Faikany’ — Mety Hitarika Sivana Ve Izany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2017 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, Español, русский, عربي, македонски, English
Ireo izay mamoaka vaovao faikany amin'ny alalan'ny media sosialy dia azo saziana eo ambanin'ny volavolan-dalàna. Sary Flickr avy amin'i Stanley Cabigas (CC BY 2.0)
Nametraka volavolan-dalàna tamin'ny faran'ny volana Jona ilay Senatera Filipina Joel Villanueva, izay manamemoka ny “fizarana vaovao faikany mampidi-doza.” Nampitandrina ireo vondrona media fa mety hitarika ho amin'ny sivana izany.
Ny Volavolan-dalàna ao amin'ny Antenimieran-doholona, No. 1492 napetrak'i Villanueva na ny “Lalàna Manameloka ny Fizarana Vaovao Faikany Mampidi-doza sy ny Fandikan-dalàna Hafa Mitovy Amin'izany” dia mamaritra ny vaovao faikany toy “ireo izay, na mikasa ny hiteraka tahotra, fizarazarana, korontana, herisetra, sy fankahalana, na ireo izay mampiseho fampielezan-kevitra mba handoto sy hanaratsy ny lazan'ny olona iray. “
Ahitana sazy ho an'ireo izay mamoaka “vaovao faikany”, na koa ho an'ireo izay mizara izany ny volavolan-dalàna, mety hanameloka ireo mpisera media sosialy izay tsy mahatakatra tsara ny fiantraikan'ny fizarana lahatsoratra fotsiny amin'ny namana.
Ny sazy any am-ponja lazain'ny volavolan-dalàna dia miankina amin'ny satan'izay sampana namoaka na nanaparitaka ilay antsoina hoe “vaovao faikany”. Mety hiatrika sazy am-ponja hatramin'ny dimy taona ny olo-tsotra hita fa meloka amin'ny famoahana na fanapariahana vaovao faikany. Mety hampitomboin'ny manampahefam-panjakana avo roa heny ny sazy ho an'olon-tsotra. Ary mety higadra hatramin'y 20 taona ny sampana media na ny sehatra haino aman-jery sosialy mampiely vaovao faikany.
Villanueva nanazava ny antony ao ambadik'ireo sazy ireo:
Tsy tokony hohamaivanina ny fiantrakan'ny vaovao faikany. Mahatonga fahatsapana sy finoana mifototra amin'ny hevi-diso miteraka fizarana, tsy fahazoan-kevitra ary koa mampitombo ny fiharatsian'ny fifandraisana marefo ny vaovao faikany.
Nilaza koa izy fa ny fandaniana ny volavolan-dalàna dia “hamporisika ny olom-pirenentsika, indrindra ireo mpiasam-panjakana, mba ho tompon ‘andraikitra kokoa sy hitandrina kokoa amin'ny famoronana, fizarana sy/na fanapariahana vaovao.”
Mpampianatra Asa Fanaovan-gazety Danilo Arona nandinika ny volavolan-dalàna efatra-pejy, ary namintina ny fanoherany:
Midadasika loatra ny famaritana ny “vaovao faikany” lazain'ny Fizarana faha. 2 satria ahitana saika izay hita fa miteraka tahotra sy fankahalana, ankoatra ny hafa (mazava ho azy fa sarotra faritana) …
Mety iharan'ny sivana lazain'ny Fizarana faha-3 amin'ny volavolan-dalàna ny fikambanam-baovao satria azo raisina fa ‘vaovao faikany” ny fanehoan-kevitra ara-drariny na ny tatitra fanadihadiana hita fa mandoto ny lazan'ny manampahefam-panjakana”.
Nanohitra ny filàna lalàna manokana ho an'ny mpiasam-panjakana i Arao, ny anton'izany hoy izy dia satria heverina fa efa manaraka fitsipi-pitondran-tena izy ireo.
Tamin'ny antsafa tamin'ny fahitalavitra, nilaza ny mpitondra teny avy ao amin'ny Foibe Ho an'ny Fahalalahana sy ny Andraikitry ny Media fa tsy ilaina ny volavolan-lalàna satria efa milaza momba ny olana noresahan'ilay loholona ny lalànan'ny fanalam-baraka ao Filipina.
Nilaza ny mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena fa raha tokony hanameloka ny vaovao faikany, tokony hiasa hankatoa ny volavolan-dalàna mbola hofidiana momba ny Fahalalahan'ny Fampahalalam-baovao ny kongresy, izay nolazainy fa hanampy hanohitra ny fizarana fahatany (tsy tompon'andraikitra) ny vaovao faikany ao amin'ny haino aman-jery sy ny aterineto.
Niampanga ny volavolan-dalànan'i Villanueva ny AlterMidya, tambajotran'ireo vondrona media tsy miankina, nolazain'izy ireo fa “fikasana tsy tompon'andraikitra, tsy ilaina sy mampidi-doza hametrahana endrika sivana amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izany.”
Ahoana no hanavahan'ny olona ny tatitra diso mifototra amin'ny fahadisoana tsy niniana sy ny tatitra diso niniana natao izay miparitaka amin'ny alalan'ny gazety, fahitalavitra sy ny aterineto?
Mety manome fahefana jadona ho an'ny mpiasa birao mba hanambara izay fandaharana amin'ny haino aman-jery mifanohitra amin'ny tombontsoam-panjakana toy ny vaovao faikany izany, ary mankasitraka mafy ny tatitra diso avy amin'ny haino aman-jery tsy miankina na an'ny fanjakana izay midera ny fitondrana.
Mpanao gazety menavazana Luis Teodoro nampatsiahy ilay senatera fa misy ireo fomba tsara hiadiana amin'ny vaovao faikany:
Tsara hamafisina ny andraikitra amin'ny fampiharana ny zo hifandray, tsy hamafisin'ny Fanjakana fa hamafisin'ny fikambanan'ny media tenany sy ny mediam-bahoaka tompon'andraikitra ampy hamantatra fa tsy hanaparitaka vaovao faikany.
Mpanao famakafakana ao amin'ny Gazety Philippine Star, Jarius Bondoc nampitandrina fa raha lany ny volavolan-dalàna, dia mety ho araraotin‘ny manampahefana izay te hanampim-bava ireo mpitsikera
Mety ho araraotina ny volavolan-dalàna. Afaka mampiasa izany mba hanafoana ny mpanohitra ny fitondrana. Amin'ny fanenjehana ireo mpitsikera ho mpampiely vaovao faikany, afaka manampim-bava ny mpanohitra ara-dalàna ny fitondrana. Mety higadra na handoa onitra noho ny fahasahiana miteny ireo mpanao ampamoaka, fa tsy ny mpisolelaka. Mety hiditra am-ponja ihany koa ireo mpanao gazety mpanao fanadihadiana.
Tsy vao sambany ny mpanao lalàna Filipina no nametraka volavolan-dalàna mikasa hiady amin'ny voka-dratsin'ny vaovao faikany. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nanolo-kevitra hanaramaso ny media sosialy ny Filohan'ny Antenimieram-pirenena mba hanakana ny fanapariahana kaonty hosoka sy vaovao faikany.